अनियमित बिजुलीले गर्मीमा जनजीवन कष्टकर, कहाँ छन् कुलमान ? - Dainik Nepal
अनियमित बिजुलीले गर्मीमा जनजीवन कष्टकर, कहाँ छन् कुलमान ?
दैनिक नेपाल २०७६ जेठ २९ गते ११:४१
बाँके, २९ जेठ । नेपालगञ्जवासीले तातो हावा र चर्को गर्मी झेलिरहेका छन् । घरभित्र पनि आरामसँग बस्न सक्ने अवस्था छैन । विद्युत् अनियमितता उस्तै छ । चर्को गर्मीमा विद्युत्मात्रै नियमित भइदिने हो भने धेरै राहत हुन्थ्यो ।
विद्युत् नियमितताका लागि पहल पनि भइरहेको छ । तर, चर्को गर्मीका बेला विद्युत् अनियमितता झन् बढ्दै गएको छ । प्रत्येक वर्ष गर्मीमा हुने अनियमितताको समस्या यस वर्ष पनि समाधान भएको छैन ।
“दिनभर गर्मीमा काम गर्छौ, विद्युत् गइरहँदा राम्रोसँग सुत्नसमेत पाइएको छैन”, अटोरिक्सा चालक दिनेश काँदु भन्नुहुन्छ । एक घण्टामा दुई/तीन पटकसम्म विद्युत् काटिने गरेको रुस्तम अली बताउनुहुन्छ । “कम्तीमा लोडसेडिङको जानकारी भए त्यसैअनुसार योजना बनाउन सकिन्थ्यो”, उहाँ भन्नुहुन्छ । पूर्वसूचनाविना हुने विद्युत् अनियमितताले मेसेनरी औजारमा पनि क्षति पुग्ने गरेको उद्योगी, व्यवसायी बताउँछन् ।
यस्तै, बाँकेको भेरी अस्पताल, कोहलपुर मेडिकल कलेज, बैष्णवी, वस्टर्नलगायतका दर्जन बढी अस्पताल तथा निजी क्लिनिकमा बिरामीको चाप उस्तै छ । चिकित्सकका अनुसार बाटो तथा फुटपाथको खाजा, नास्ता नखाने, पानी उमालेर अथवा फिल्टर गरेर पिउने, दिसापिसाब गरिसकेपछि साबुनपानीले हात धुने, सफासुग्घर गर्ने बानीको विकास गरेमा बिरामी हुनबाट जोगिन सकिन्छ ।
मानिसको चहलपहल बढ्दै जानु, खानपानमा बेवास्ता गर्नुलगायतका कारण बिरामीको चाप बढेको डा अधिकारीले बताउनुभयो । गर्मीमा पूरै शरीर ढाक्ने गरी लुगा लगाउन र अत्यावश्यक कामबाहेक घर बाहिर ननिस्कन चिकित्सकको सुझाव छ । –रासस